Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 243312 times)
« Reply #690 on: December 13, 2011, 12:36:01 PM »
ရွာစွန်ရှိ အိမ်တစ်လုံးသို့လူငယ်တစ်ယောက် ညအချိန်မတော် ရောက်လာပြီး တံခါးခေါက်သည် ။
သူ့ ကို တစ်ညအိပ်ခွင့်ပြုပါရန် တောင်းပန်သည် ။ အိမ်ရှင်မက အိမ်ထဲက ပြန်ပြောသည် ။
" မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင့်...၊ အိမ်မှာ ကျမ တစ်ယောက်တည်းရှိတယ်. "
" စိတ်ချပါ...ကျနော်ဟာ လူကြီးလူကောင်းပါ "
အိမ်ရှင်အမျိုးသမီး တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်သည် ။ နောက်တစ်နေ့ မနက်... လူငယ်သည် အိပ်ခန်းထဲမှ
နေ၍ အပြင်သို့ ကြည့်လိုက်ရာ ခြံထဲတွင် ကြက်မနှင့် ကြက်ဖတွေ တစ်အုပ်ကြီးကို မြင်လိုက်ရသည် ။ လူ
ငယ်က အမျိုးသမီးကို ပြောသည် ။
" ကြက်ဖတွေ များလှချည်လား...။ တစ်ကောင်ဆို တော်ရောပေါ့ "
" ကျမဆီမှာ ကြက်ဖ ပီသတဲ့အကောင် တစ်ကောင်ပဲ ရှိတာပါ...။ ကျန်တာတွေက
« Reply #691 on: December 14, 2011, 09:47:32 AM »
" ခေတ် မီ ချင် လို့မ ဟုတ် ပါ "
မော်စကိုမြို့ ရုံးကြီးတစ်ရုံးမှ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးဖြစ်သူ မိမိ၏ မိတ်ဆွေအား နားကပ်ပန်လျှက်
လမ်းလျှောက်လာသည်ကို တွေ့ ရာ မစ္စတာ ပီထရော့က မေးလိုက်သည် ။
" ခေတ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းကို ကျနော်တို့ လို အရွယ်တွေတောင် မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ သဘောလားဗျ "
" နားကပ်ကို ပြောတာလား... ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့ ဗျာ...။ တစ်ခါ တစ်လေတော့လဲ ကြောင်တောင်
တောင် အလုပ်ကို မလုပ်ချင်ဘဲနဲ့ လဲ လုပ်ရတာပဲဗျို့"
" ဟုတ်ကဲ့....ဒါနဲ့နားကပ်ပန်တာ ကြာပြီလားဗျ.. "
" အိပ်ရာထဲမှာ ဒီနားကပ်ကို မိန်းမ မြင်သွားကတည်းကပဲ ဗျာ "
« Reply #692 on: December 14, 2011, 09:58:51 AM »
" နောက် တစ် ယောက် ဘယ် မှာ လဲ "
ညစာစားပွဲတစ်ခုတွင် အိမ်ရှင်က တစ်ယောက်သော ဧည့်သည်ကို မေးသည် ။
" ကျနော့်ရဲ့ဇနီးချောကို ခင်ဗျား မြင်ပြီးပြီလားဗျ.... "
" ဇနီးချော..ဟုတ်လား.....ဘာလဲ..ခင်ဗျားမှာ မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိတာလားဗျ.. "
" လူ သတ် မှု "
တရားရုံးတွင် ဖြစ်သည် ။ တရားသူကြီးက တရားခံကို မေးသည် ။
" တရားခံ ရွှေဂဲ ကိုယ့်မိန်းမကို ဘာဖြစ်လို့သတ်ရသလဲ.....ရုံးတော်ကို ရှင်းပြပါ "
" ကျနော်...သူ့ ကို မချစ်တော့လို့ ပါ "
" အချစ်ပေ့ါသွားတယ်ဆိုတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ ဒါကြောင့် သတ်တယ်
ဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး.. "
" ဒီအတိုင်းဆိုရင်...သူက ကျနော့်ကို ကွားရှင်းခွင့် ပေးမှာ မဟုတ်လို့ ပါ "
« Reply #693 on: December 22, 2011, 03:44:28 PM »
" အ ရက် ဖြတ် မယ် ဟေ့ "
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အရက်ဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။ သူတို့ တွင် မသောက်ရသေးသော အရက်
တစ်ပုလင်း ကျန်နေသေးသည် ။ ဤပုလင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ လုပ်ရမည်နည်း ဆိုသည်ကို တိုင်ပင်
ကြသည် ။ တစ်ယောက်က ပြောသည် ။
" ဒီလိုလုပ်....ပုလင်းကို ငါ့နောက်ကျောမှာ ၀ှက်လိုက်မယ်..။ မင်းက ပုလင်းကို ငါဘယ်လက်နဲ့ 
ကိုင်ထားသလဲဆိုတာ ပြော.....။ မှန်ရင်နောက်ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့သောက်လိုက်ကြမယ်ကွာ "
သဘောတူသဖြင့် တစ်ယောက်က ပုလင်းကို ၀ှက်လိုက်သည် ။ နောက်တစ်ယောက်က စဉ်းစားပြီး ပြောသည် ။
" ညာဘက်လက်နဲ့ပုလင်းကို မင်းကိုင်ထားတယ်... "
" ပြန်စဉ်းစားပါဦးကွ... "
« Reply #694 on: December 22, 2011, 03:53:18 PM »
" ဆ ရာ ၀န် စ ကား "
" ဒေါက်တာ..အစာ မစားခင် အရက်တစ်ခွက်လောက် သောက်တာဟာ
တကယ်ပဲ အန္တာရာယ်ရှိသလားဟင် "
" မရှိပါဘူး....ဒါပေမဲ့ ..ခဏခဏတော့..အစာ မစားပါနဲ့"
" က တိ "
" ရှင်...အရက်တွေ မူးလာပြန်ပြီလား...? အရက်မသောက်တော့ပါဘူးလို့ 
ရှင်ပဲ ကတိပေးခဲ့တယ် မဟုတ်လားရှင့် "
" မူးမူးနဲ့ ဘာမဆို ကတိပေးကြတာချည်းပဲဟေ့.... "
« Reply #695 on: December 23, 2011, 12:57:08 PM »
" လေ ယာဉ် နှစ် စီး တိုက် မိ ခြင်း "
စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံတွင်ဖြစ်သည် ။ လူနာနှစ်ယောက်သည် ကော်ရစ်ဒါ၏ တစ်ဖက် တစ်ချက်မှ နေ၍
လက်နှစ်ဖက်ကို ကိုယ်စီ ဖြန့် တန်းကာ ပါးစပ်မှလည်း လေယာဉ်အင်ဂျင်မည်သံလုပ်ပြီး..အရှိန်နှင့် " ပျံသန်း "
လာကြသည် ။ ကော်ရစ်ဒါ၏ အလယ်လောက်တွင် လေယာဉ်နှစ်စီး ခေါင်းချင်းဆိုင် တိုက်မိကြပြီး ပိုင့်လော့
နှစ်ယောက်စလုံး သတိမေ့ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျသွားကြသည် ။
တာဝန်ကျ ဆရာဝန်ရောက်လာသည် ။ သူနာပြုဆရာမက ဆရာဝန်ကို စိုးရိမ်သံဖြင့် မေးသည် ။
" ဒေါက်တာ...အခြေအနေ ဘယ့်နှယ့်လဲဟင်.. "
" မစိုးရိမ်ရပါဘူး... ကောင်းကင်မှာ တိုက်မိတာဆိုရင်တော့ မလွယ်ဘူး. "
« Reply #696 on: December 24, 2011, 10:07:02 AM »
" ပြန် ရ မယ် ထင် လို့"
ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျသည် မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ပီထရော့ ထံမှ ၄င်း၏ ၂၅ နှစ်မြောက် ငွေရတုမင်္ဂလာပွဲသို့တက်ရောက်ပါမည့်
အကြောင်း ဖိတ်ကြားစာကို စာတိုက်မှ တစ်ဆင့်ရသည် ။ ဖိတ်စာ၏နောက်ဆုံးတွင် အောက်ပါအတိုင်းရေးထားသည် ။
" မတက်ရောက်လာနိုင်ကြသည့် မိတ်ဆွေများထံ ၄င်းတို့ ၏ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ပြန်ပို့ ပေးမည် " ဟူ`၍ ဖြစ်
သည် ။ ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ...မိန်းမနှင့် တိုင်ပင်သည် ။
" တစ်ခုခုတော့ လက်ဆောင်ပေးမှ ဖြစ်မယ်...။ မပေးရင် မကောင်းဘူး..။ ထွက်ပေါက်တော့ ရှိတယ်..၊ ပွဲကို
ငါတို့သွားမတက်ဘူး...။ အဲ့ဒါဆို .. တို့ ရဲ့လက်ဆောင်ကို သူ ပြန်ပေးရမှာပဲ...."
ထို့ နောက် ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျသည် အိမ်နီးချင်းဆီသွားပြီး.. ချက်နိုင်ငံလုပ် အကောင်းစား ပန်းအိုးတစ်လုံးကို ငှားသည် ။
ယင်းပန်းအိုးကို ပီထရော့ ထံ ပို့ လိုက်သည် ။
တစ်ရက်..၊ နှစ်ရက်..၊ သုံးရက်..ငါးရက်ကြာသွားသည် ။ ပန်းအိုးပြန်မရောက်လာသေး..။ ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ စိုးရိမ်စိတ်ဝင်
လာသည် ။ နောက်တပတ်ကြာသွားသောအခါတွင်မူ ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ ..မိန်းမကို ပြောသည် ။
" ပီထရော့တို့လင်မယား...ငါနဲ့ငါ့ပန်းအိုးကို မေ့နေပြီ ထင်တယ်..။ သူတို့ ဆီ ငါသွားပြီး..သွယ်သွယ်ဝိုက်ဝိုက်
ပီထရော့ တို့ အိမ်သို့ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ ရောက်လာသည် ။ ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျကို တွေ့ သည်နှင့် ပီထရော့ ၀မ်းသာအားရ ဆီးကြို
ပြီး ပြောသည် ။
" ပေါ်လာသေးသကိုး..သူငယ်ချင်းရယ်..။ ဒီနေ့ တောင် ငါ့မိန်းမကို ပြောနေမိသေးတယ်..။ ဒီနေ့ မှ မင်း မရောက်
လာဘူးဆိုရင်...မင်းရဲ့ပန်းအိုးကို ပြန်ပို့ ပေးမှလို့ ...... "
« Reply #697 on: December 26, 2011, 10:46:25 AM »
" အိမ် မ ပြန် ဘူး ဟေ့ "
မိန်းမဖြစ်သူ အမြဲတမ်း ပူညံပူညံလုပ်နေသည့်ကြားက ကိုဘမောင်တစ်ယောက် အရက်ဆိုင်သို့နေ့ စဉ်ရက်ဆက်
သွားလျှက်ရှိသည် ။ မိန်းမဖြစ်သူမျာလည်း အကြီးအကျယ် စိတ်ဆင်းရဲနေရသည် ။ တစ်နေ့ တွင် မိတ်ဆွေများက ကိုဘ
မောင်၏ ဇနီးကို အကြံပေးကြသည် ။
" ဒီလို လုပ်ကြည့်ပါလားအေ့.. ညည်းသူ့ ကို မဆူနဲ့ ....သူ့ ကို ချိုချိုသာသာနဲ့ယုယုယယ ဆက်ဆံကြည့်..
အဲ့ဒါဆို အိမ်ကိုပဲ ပြန်ချင်တဲ့စိတ် ပေါ်လာလိမ့်မယ်... "
တစ်ရက်တွင် ညဉ့်နက်မှ ကိုဘမောင် အရက်မူးပြီး အိမ်သို့ ပြန်ရောက်လာသည် ။ မိန်းမက သူ့ ကို မွှေးမွှေးပေးပြီး
ဆီးကြိုသည် ။ ဟင်းကောင်းကောင်းနှင့် ထမင်းကျွေးသည် ။ ထို့ နောက် ကိုဘမောင်အနားတွင် ကပ်ထိုင်ပြီး..အနမ်းမိုး
တွေ ရွာချသည် ။ တီတီတာတာ ပြောသည် ။ နမ်းနေရင်းက " မောင်....အိပ်ရာထဲ သွားကြရအောင် " ဟု တိုးတိုးလေး
ပြောသည် ။ မိန်းမဆွဲခေါ်ရာနောက်ကို လိုက်ရန်ပြင်ရင်း ကိုဘမောင် ပြောသည် ။
" အိမ်ပြန်ရင်လဲ မိန်းမက ပူညံပူညံနဲ့ကန်ချမဲ့အတူတူ မင်းနဲ့ အိပ်တာပဲ ကောင်းပါတယ်လေ...လာ...သွားကြမယ်.. "
« Reply #698 on: December 27, 2011, 09:49:12 AM »
" ဦး ထုပ် ဆောင်း ပါ "
ဂျူးဘာသာရေးဆရာ.( ရာဘိုင် ) ၏ ဇနီး ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကလေးမွေးရန် ဖြစ်လာသည် .။ ဘုရားကျောင်းသို့ 
ပုံမှန်လာရောက် ၀တ်ပြုသူများကို ရာဘိုင်က မေတ္တာရပ်ခံသည် ။ အိမ်ထောင်စုတွင် လူဦးရေတိုးလာသည်နှင့်အမျှ အ
ကုန်အကျလည်းတိုးလာသည် ဖြစ်၍ အလှူငွေ တိုးထည့်စေလိုခြင်းဖြစ်သည် ။
၀တ်ပြုသူများတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ရာဘိုင်၏ အိမ်ထောင်စုတွင် လူဦးရေတိုးလာတိုင်း အလှူငွေ တိုးထည့်ကြရန်
ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။ သို့ သော် ရာဘိုင်၏ဇနီး ခြောက်ယောက်မြောက် ကလေးကို မွေးရန် ဖြစ်လာသည့်အခါ အလှူ
ရှင်များ မကျေမနပ်ဖြစ်လာသည် ။ ထိုအခါ ရာဘိုင်က ပြောသည် ။
" ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့မကျေမနပ် ဖြစ်ကြရတာလဲ...။ ကလေးဆိုတာ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အရ ဖြစ်လာတယ်
ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့မသိကြဘူးလားဟင်.. "
နောက်ဆုံးခုံတန်းမှ အသံတစ်သံ ပေါ်ထွက်လာသည် ။
" မိုး နဲ့နှင်းကလဲ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီ ကျလာတာပါပဲ..။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအခါမှာ ကျနော်တို့ တွေ ဦးထုပ်
ဆောင်းကြတယ်မဟုတ်လား...။ ဘုရားသခင်ကလဲ ဘာမှ မပြောပါဘူး.. "
« Reply #699 on: December 27, 2011, 10:13:03 AM »
ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျက ရာဘိုင်ကို မေးသည် ။
" ရာဘိုင်.... တကယ်လို့ဒေါ်လာတစ်သန်း ပါတဲ့ အိတ်တစ်လုံးကို ရာဘိုင် ကောက်ရမယ် ဆိုရင်
ပိုင်ရှင်ကို ပြန်ပေးမလားဟင်... "
" ပိုင်ရှင်ဟာ အင်မတန် ဆင်းရဲတဲ့လူ ဆိုတာ သေချာရင် ပြန်ပေးမယ်. "